GPS na gam akporo, SuperSurv bụ nnukwu GIS ọzọ - Geofumadas
GPS na gam akporo, SuperSurv bụ nnukwu GIS ọzọ
Eprel, 2013 GPS / Equipment, mbụ echiche, SuperGIS
SuperSurv bụ ngwá ọrụ mepụtara karịsịa maka GPS na gam akporo, dịka ngwa nke na-ejikọta ọrụ GIS nke ị nwere ike ijide data n'ọhịa nke ọma na nke akụ na ụba.
GPS na gam akporo
N'ihe na-adịbeghị anya, SuperSurv 3 na-agbanwegharị mkpanaka ahụ dịka onye nchịkọta, na geolocation, nhazi ihuenyo, ajụjụ, ntụgharị na ụzọ ntụgharị.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na enwere ike ịchekwa data ahụ n'ụdị faịlụ (SHP) na GEO, nke bụ usoro ikike nke Supergeo; anyị kwuru banyere ya ụbọchị ole na ole gara aga. Iji ọrụ GPS ị nwere ike ịchekwa ụzọ gasị.
Ihe nwere ike ime na SuperSurv 3
Na-anakọta data ngwa ngwa na akara, akara na polygon formats
Gosipụta data gbasara data gbasara usoro nhazi ụwa
Mepụta na jikwaa ụzọ
Nweta data site na SuperGIS Server
Chọta ma jiri map eji GIS
Lee ebe na ntụziaka na ozugbo
Jiri map na-ekpuchi, na shp, usoro GEO na ihe ọmụma echekwara na faịlụ nke ndọtị sgt
Jiri eziokwu dị elu na-egosi ụzọ
Jiri uru GPS na Android
Eji nke SuperSurv 3
Ndị na-arụ ọrụ n'ọhịa, maka ebumnuche cadastre na ọmụmụ gburugburu ebe obibi, nwere ike iji njide nke ozi site na GPS ma ọ bụ wepụta freehand na ihuenyo. Nwere ike gbanyụọ, gbanye ma họrọ akwa iji họrọ ebe data ga-echekwa. Iji kwado nchịkọta data, ọ bụ ihe na-akpali mmasị na oyi akwa ọ bụla nwere ike ịnwe tebụl nwere njirimara nwere ike ịmegharị ederede, ọnụọgụ, ụbọchị, oge, nhazi, wdg, yana enweghị nloghachi dị ukwuu.
Na-akwado nhazi ụwa na usoro ala. Ihe onwunwe E-compass na-enye gị ohere ịchọta ebe dị na map; nke mere na ndị ọrụ nwere ike ịhụ ihe ndị dị ugbu a na ọkwa ọkwa ma soro ụzọ ha gara.
Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ igwefoto nke mobile, ọ bụ ama ama ma ọ bụ mbadamba, nwere ike ịchekwa ya.
Ngosipụta data ahụ abụghị naanị na vector na raster formats, kamakwa ọrụ site na ọrụ map weebụ. Gbanwe n'etiti data nke otu ọrụ na ndị ọzọ ... emeela nke ọma na arụmọrụ na arụmọrụ.
N'ikpeazụ, maka nhazi dị mfe, ọ bụ ihe na-akpali mmasị na mgbe ị na-emepụta ọrụ ọhụụ ọ na-eji njirimara nke ikpeazụ ejiri mee ihe n'otu ebe na-enweghị ịhazi ihe niile ọzọ. Akụkụ ọzọ dị ịrịba ama nke ịdị irè bụ njikwa nke ọkwa, nke enwere ike ịmechi ya n'usoro dị iche iche, yana nhọrọ nke nghọta nke na-eme ka ị hụ ihe karịrị otu oyi akwa n'otu oge ahụ.
Na nkenke, ihe kacha mma maka GPS na gam akporo.
Ego ole ka SuperSurv bara?
A na-enwetakarị ikikere na 200 dollar, n'ihi na ahịa ZatocaConnect na-asụ Spanish nwere ike inye ya ego pụrụ iche.
Ozi ndi ozo:
Rịọ ọnụ na ọnụahịa pụrụ iche
Previous Post«Previous Ebe a na-akpọ Intelligence Brazil Conference, a na-achọ ndị ngosi
Next Post Esi esi jikọọ na Ịntanetị na mpaghara dịpụrụ adịpụNext »
3 Na-aza "GPS na gam akporo, SuperSurv bụ nnukwu GIS ọzọ"
Enwere njikọ iji budata gis gis
Seba kwuru, sị:
Achọpụtara m na ọ na-adọrọ mmasị, mana enweghị m ike ibudata ya na saịtị ahụ. Ọ bụ ebe ọzọ ????
fabian yanez kwuru, sị:
Ike, 2013 na
biko ihe na-adọrọ mmasị na-ezitere m ozi ndị ọzọ